“Maleeshiyadda soo tuurtuurtay Xudun may Joojin Doorashadda Deegaanka..” | Somaliland.Org
“Maleeshiyadda soo tuurtuurtay Xudun may Joojin Doorashadda Deegaanka..”
November 28, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)-Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in ciidanka qaranku difaaceen koox maleeshiyo ah oo soo tuur-tuurtay goobo cod bixineed oo ku yaala degmadda Xudun ee gobolka Sool.
Xukuumaddu waxay sheegtay in rabashadaasi aanay joojinin codbixinta doorashadda, sidaasna waxa shaaciyay Wasiirka Daakhiliga.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Nuur Carraalle (Duur) ayaa sheegay in deegaamada dalka oo dhan ay jawi nabad-gelyo ah uga dhacday doorashadda deegaanka, waxaanu yidhi “Waxa ILAAHAY mahadii ah inay maanta guulaystay doorashaddii Goleyaasha deegaanku, meel walba iyo deegaan kastaba dhawaaqa ka soo yeedhayaa waa dhawaaq nabadeed iyo mid farxadeed oo ah inay doorashadii si habsami ah uga socoto. Aniguna dawlad ahaan nabadda ay ku dhacday ayaanu ku faraxsan nahay.”
“Doorashadii Goleyaasha deegaanku 23-kii degmo doorasho degmo aanay guud ahaan ka qabsoomini ma jirto. Waxase jiray goobo aanay ka qabsoomin oo ay ka mid yihiin deegaamo bariga Sanaag ka tirsan. 21 degmo doorasho oo ka mid ah 23-ka degmo doorasho 100% ayay uga dhacday doorashadda deegaanku. Labada degmo doorasho ee kalena intii laga gaadhi karayay ayaa laga qabtay. Waana doorashadii ugu balaadhnayd ee ku wada fiday degmooyinka dalka oo dhan,”ayuu yidhi Wasiirka Daakhiliga.
Wasiirku oo wax laga weydiiyay shaqaaqo ka dhacday degmadda Xudun, waxaanu yidhi “Doorashada deegaanku waa doorashadii ugu balaadhnayd waxaanay ka socotaa goobo aad u badan oo aanay doorashooyinkii hore ka dhicin oo ah Sool iyo Sanaag Bari.degmada Xudun waxay ka mid tahay degmooyinka aanay hore uga qabsoomi jirin doorashooyinkii hore, hase yeeshee sanadkan laga qabtay. Maadaama oo ay tahay goob cusub koox maleeshiyaad ah ayaa meelo soo tuur-tuuray. Laakiin may hakin doorashadii Ciidanka qaranka ayaana difaacay.”
Guddoomiyaha Komishanka doorashooyinka Somaliland Md. Ciise Yuusuf Xamari, ayaa isaguna tafaasiil ka bixiyay qaabka ay doorashadu uga bilaabantay dalka waxaanu yidhi “Doorashadu si wanaagsan ayay goob kasta uga socotaa dalka oo dhan, subaxnimadda hore ayay yara jirtaan inay dadku ku yara dawakhaan oo ay kala garan waayaan goobihii. Tusaale ahaan goob aanu doorashadii hore lagu qabtay oo masalan Meherad laga dhigay ayaanu meelo sakadi u dhaxayso goobtii u rarnay. Markaa waxa suurto gal ah inay dadka qaarkood ay yara daydayaan dadkii codka ka dhiibanayay ama kuwii ka shaqeynayayba. Markaa inta hore ayaa la isku yara meeraystaa abaarro 8:00 subaxnimaba si wanaagsan ayay hawshu way iska kala miirantay.”
Previous PostKomishanka Oo Ka Hadlay Xiliga lagu dhawaaqayo Natiijadda Doorashada DeegaankaNext PostGudida Doorashooyinka : “Doorashaddii Goleyaasha deegaanka oo caawa xidhantay”	Blog